MYUI ပညာသင်ဆုသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင် ဂျပန်ဘာသာသင်ကြားလျှက်ရှိသောကျောင်းသူကျောင်းသားများအားဂျပန်ဘာသာသင်ကြားရေးအတွက် ထောက်ပံ့ပေးအပ်သောပညာသင်ဆု ဖြစ်ပါသည်။ ဤပညာသင်ဆုသည် ဂျပန်နိုင်ငံရှိBusiness Plus Support Company ၏အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် Ms.MihoyoFujii မှဂျပန်ဘာသာကို ကြိုးစားသင်ကြားလျက်ရှိသော မြန်မာလူငယ်များအားတောက်ပသောအနာဂတ်သို့ အောင်မြင်စွာလျှောက်လှမ်းနိုင်ရေးအတွက် ကူညီထောက်ပံ့ပေးအပ်သောပညာသင်ဆု ဖြစ်ပါသည်။
ပညာသင်ဆု- ၂သိန်း ကျပ် (အောက်ပါ ဂျပန်ဘာသာသင်တန်းကျောင်းများတွင် တက်ရောက်ရန်အတွက်သာ)
ချီးမြှင့်မည့် ကျောင်းသားဦးရေ- ၁၀ ဦး
1) ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ JLPT, TopJ, NAT Test စသည့် စာမေးပွဲများတွင် N5 (or) N4 ကိုထူးချွန်စွာအောင်မြင်ထားသူ၊
2) ဂျပန်ဘာသာသင်ကြားရန် ငွေကြေးလိုအပ်ချက်ရှိသူ၊
လျှောက်လွှာတင်ရမည့်ကာလ - ၂၀၁၇ စက်တင်ဘာလ (၂၅) ရက် မှ (၆) ရက် အတွင်း
1) MAJA Center
တိုက် C ၊ ၂လွှာအခန်း(G21, 22) ၊ ပုလဲကွန်ဒို၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Tel: 09-861 3848
2) Kyoshin JETC Japanese Language Academy
တိုက် ၂၁/၂၃၊ အခန်း(5A)၊ ဦးထွန်းလင်းခြံလမ်း၊ လှည်းတန်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ Tel: 09-2549 22110, 09-2549 22330
3) JETC Japanese Training Centre
အမှတ် ၂၂၊မြေညီထပ်၊၂၈ လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Tel: 01-243635, 09-25353 2828
အသေးစိတ်အချက်အလက်နှင့် လျှောက်လွှာပုံစံများကိုအထက်ဖော်ပြပါကျောင်းများသို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းရယူနိုင်ပါသည်။
NIYE Junior Program 2017 Interview ဖြေဆိုအောင်မြင်သူများစာရင်း။
3.9.2017(Sun) MAJA ရုံးခန်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် NIYE Junior Program 2017 Interview ကိုဖြေဆိုအောင်မြင်ကာ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခွင့်ရမည့်ကျောင်သား/ကျောင်းသူ (၆) ဦးနှင့် အရံ (၂) ဦးမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
1. Mg Nyan Lin Khant (NIYE – 050)
2. Mg Min Moe Thet Chan (NIYE – 010)
3. Mg Thihan Moe Kyaw (NIYE 029)
4. Ma Thel Mon Theint (NIYE – 018)
5. Ma Myint Myat Mon (NIYE – 014)
6. Ma Aye Mon Myint (NIYE – 058)
Attendant : Daw Nant San Hte Bwa
1. Ma Kaung Hnin Phyu Min (NIYE – 046)
2. Mg Pyae Pone Naing (NIYE -054)
အထက်ပါရွေးချယ်ခံရသည့် ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများသည် မိဘအုပ်ထိန်းသူ(၁)ဦးနှင့်အတူ MAJA ရုံးခန်း သို့ 5.9.2017 (အင်္ဂါနေ့)မနက် ၁၁ ခွဲတွင်　လာရောက်ပေးပါရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။
မှတ်ချက် ။ ။ Passport (Original) ယူဆောင်လာပါရန်။
မြန်မာနိုင်ငံဂျပန်ပြန်ပညာသင်ဟောင်းအသင်း၏ MAJA ရုံးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ရုံးဝန်ထမ်း (မ) တစ်ဦးအလိုရှိပါသည်။
• ဂျပန်စာ (N2) အောင်ပြီးအင်္ဂလိပ်စာရေး၊ဖတ်၊ပြောကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။
• Microsoft Office (Word, Excel), Email ကျွမ်းကျင်ရမည်။
• အလုပ်ချိန် - ၉:၃၀ မှ ၁၆:၃၀ထိ( တစ်ပတ်လျှင်၂ရက်နားရမည် )
• CV အချက်အလက်ပြည့်စုံစွာရေးသား၍ရရှိထားသောမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ဘွဲ့ လက်မှတ်
မြန်မာနိုင်ငံဂျပန်ပြန်ပညာသင်ဟောင်းအသင်း၏ Japan Culture House တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ရုံးဝန်ထမ်း (ကျား/မ) တစ်ဦးအလိုရှိပါသည်။
• ဂျပန်စာ (N1) အဆင့်၊အင်္ဂလိပ်စာရေး၊ဖတ်၊ပြောကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။
• အလုပ်ချိန် - ၉:၀၀မှ၁၇:၃၀ထိ( တစ်ပတ်လျှင်၂ရက်နားရမည် )
၂၀၁၇ စက်တင်ဘာလ(၂၀)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍CVကို MAJA ရုံးခန်းသို့ ရုံးချိန်အတွင်းပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
၇၀၇၊ ၇လွှာ၊ တိုက် (C)၊ ပုလဲကွန်ဒို ၊ဗဟန်း